Iyo Apple Watch ichave iine chayo chayo kushanda muIOS 8.2 | Ndinobva mac
Iyo Apple Watch ichave iine chayo chayo kushanda muIOS 8.2
Zviripachena kuti chero kufamba kunoitwa neCupertino ndiko kwakanaka sosi yeruzivo kune vanogadzira kuti vawane mhedziso. Iyi ndiyo kesi yazvino vhezheni yeIOS 8.2 beta 4, umo zvakaonekwa kuti pakupedzisira iyo Apple Watch uchave nechikumbiro chakazvitsaurira pane iyo system.
Iye zvino zvinoramba zvichionekwa kana chinhu chimwe chete ichi chichiitika mune anoteedzana betas yeOS X 10.10, chinova ndicho chinhu chine musoro kuita. Sezvo imi mese mave kutoziva, iyo Apple Watch ichafanira kushanda ne iPhone, uye izvi zvakare zvinoda Mac kuti ikwanise kuwiriranisa zvirimo.
Mune ino ichangoburwa beta yeiyo nhare mbozha system iyo Apple yaita kuti iwanikwe kune vanogadzira, zvakaonekwa kuti muzvirongwa zveBluetooth zvakaratidzirwa "Kuti ubatanidze Apple Watch, vhura Apple Watch application."
Ndosaka zvichisimbiswa kuti iyo Apple Watch ichave nechishandiso chakazvipira paIOS kuti ikwanise kuita yekutanga activation yeiyo wachi uyezve kuti iise akasiyana mafomu paApple Watch. Zvino, hazvisati zvazivikanwa kana zvichibva pafoni pachayo kubva kwauchazowana iyo nyowani Apple Watch application chitoro kana iri kubva kuMac zvakare kubva kwatingaite mabasa aya.
Izvo zviri pachena ndezvekuti Apple Watch inotanga kuvimba ne iPhone uye vangadai vakagadzirira zvese nenzira yekuti huwandu hukuru hwe mabasa anogona kuitwa nefoni pachawo ndizvo zvinobvumidza Apple Watch kuzorora uye nekudaro chengetedza simba, iro sekuziva kwedu tese ndiyo poindi isina kusimba yatisingazive chero nhasi.
Tichaona kuti nyaya yese yeApple Watch inosara sei munaKurume, kana mavhezheni ayo matatu akaiswa kutengeswa kubva pamutengo wemadhora mazana matatu nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe emutambo weSport, angangoita madhora mazana mashanu eshanduro yesimbi ine tambo dzesimbi uye anodarika 1500 madhora iyo vhezheni yegoridhe iyo yavakati Edition.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Iyo Apple Watch ichave iine chayo chayo kushanda muIOS 8.2
Nzira yekuwana nekukurumidza kubatana kweWi-Fi nekubhadharira Airdrop
Intel Inotangisa Nyowani Broadwell Ma processor eMacBook Air uye MacBook Pro Retina 13 "